फेसबुकको ‘लाइक’ बटनको विरोधमा उत्रिए यसैका निर्माता - HNB News
फेसबुकको ‘लाइक’ बटनको विरोधमा उत्रिए यसैका निर्माता
काठमाडौँ । जस्टिन रोजेन्स्टनले आफ्नो ल्यापटपको अपरेटिङ सिस्टममा फेरबदल गरेर रेडिट ब्लक गरेका छन् । उनले आफूलाई स्नापच्याटबाट निषेध गरेको छन् । यसलाई उनी लागूऔषध हिरोइनसँग तुलना गर्छन् । साथै उनले आफ्नो फेसबुक प्रयोगमा पनि नियन्त्रण गरेका रहेछन् । तर त्यति पनि प्रयाप्त नभएझैँ अगस्टमा यी ३४ वर्षीया प्रविधिक कार्यकारीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र अन्य लती प्रविधि नियन्त्रण गर्न अझ क्रान्तिकारी कदम उठाएका छन् ।
रोजेन्स्टनले एक नयाँ आइफोन किने र त्यसको एसिस्टेन्टलाई कुनै एप्स डाउनलोड गर्न नमिल्ने बनाउन निर्देशन दिए ।
उनी फेसबुकको ‘लाइक’को मोहक गुणबारे विशेष जानकार थिए । उनले यसलाई ‘झुटो आनन्दको चहकदार घण्टी’ भन्ने गर्छन् । उनको अनुसार यो जति सम्मोहक छ त्यति नै खोक्रो छ । उनी यसबारेमा बढी जानकार हुनु कारण उनी आफै ‘लाइक’ बटन निर्मातामध्ये एक हुन् । उनी फेसबुकमा कार्यरत रहँदा सो बटन निर्माण गरेका थिए ।
‘गज्जब’ बटन भनिएको सो बटनको प्रतिरूप बनाउन रातभर जागा बसेको एक दशकपछि रोजेन्स्टन आफै आफ्नो आविष्कारको विरोधमा उत्रेका छन् । उनी ‘सिलिकन भ्याली’को एउटा सानो तर बढ्दो सङ्ख्यामा रहेको एक समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन् जो ‘एटेन्सन अर्थतन्त्र’को उदयबारे चिन्ता लिन थालेका छन् । यस्ता खालका व्यवसायहरू विज्ञापनकामा टिकेको हुन्छन् ।
यी विरोधीहरूको समूहमा संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी भने छैनन् । ती त संसारलाई अझ सुन्दर बनाउने मन्त्रबाट टस मसको अवस्थामा छैनन् । यसमा कर्पोरेट भर्याङमा केही खुट्किला चढेकाहरूको ः डिजाइनस्, इन्जिनियर र उत्पादन म्यानेजरहरूको सङ्ख्या बढी रहेको छ । रोजेनस्टेनजस्तै । “यो धेरै सामान्य अवस्था हो । मानवले राम्रो नियतले बनाएका कुराहरूले पछि नसोचेको परिणाम निकालेको धेरै उदाहरणहरू छन् ।”
गुगलमा काम गर्दा जिच्याट बनाउने टिममा पनि काम गरेका रोजेन्स्टन हाल सान फ्रान्सिस्कोमा आधारित एक कम्पनीमा काम गर्छन्, जसले अफिसमा उत्पादनशीलता सुधारसम्बन्धी काम गर्छ । उनी आजकल मोबाइलमा लत लाग्ने उपकरणको प्रयोगले मनोविज्ञानमा पर्ने असरबारे ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । खोजका अनुसार मानिसले दैनिक रूपमा औसतमा २६१७ पटक मोबाइल छुने गर्छन् ।
प्रविधिले मान्छेको निरन्तर एकाग्रमा असर पारेर आइ.क्यूमै असर पर्नेबारेमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एक नयाँ अनुसन्धानले देखाए अनुसार स्मार्टफोनको वरपर रहँदा मात्रै पनि त्यसले मान्छेको दिमागमा असर पर्ने देखिएको छ । यो अनुसन्धानले गर्दा स्मार्टफोन बन्द गरिएको थियो । “हर कोहीको ध्यान भङ्ग छ” रोजेनस्टनले भने “हर समय ।”
त्यो चासो प्रविधिले राजनीतिमा पार्ने प्रभावको तुलनामा सानो हो । विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालको लत र पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक बदलावमा सम्बन्ध रहेको औँल्याएका छन् । तिनले सामाजिक सञ्जालको हालको प्रयोगले राजनीति प्रणाली उल्ट्याउनेदेखि बेलगाम अवस्थामा यसले लोकतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याउने देखाएको छ ।
सन् २००७ मा रोजेन्स्टेन फेसबुकको कर्मचारीको त्यो सानो समूहको एक सदस्य थिए, जो एकै क्लिकमा ‘लाइक’ हुने प्रविधिको विकास गर्नमा लागि परेका थिए । यसको प्रयोगको उद्देश्य सो प्लाटफर्ममा सकारात्मक प्रभाव सञ्चार गर्नुथियो । रोजेन्स्टन अनुसार सो बटन अभूतपूर्व सफल भयो । यसले फेसबुकको संलग्नतामा व्यापक वृद्धि गरायो । मान्छेहरू यसले प्रदान गर्ने अल्पकालीन आनन्दमा रमाउन थाले । फेसबुकले यसबाट प्रयोगकर्ताको रुचिहरू थाहा पाउने अवसर पायो । ती जानकारी सङ्कलन गरेर उसले त्यसलाई विज्ञापनदातालाई बेच्न थाल्यो । यो आइडिया ट्विटरले मुटु आकारको ‘लाइक’ (पहिले तारा आकारको ‘फेबरेट’)का रूपमा अनुसरण गर्यो । पछि इन्स्टाग्राम र अन्य धेरै एप्सहरू र वेबसाइटहरूले पनि यो प्रविधिको सिको गरे ।
“मलाई अहिले यसबारे बहस गर्नु विशेष महत्वपूर्ण लाग्नुको एउटा कारण हामी विगतको जीवन स्मरण गर्ने अन्तिम पुस्ता हौँला ।” रोजेन्स्टनले भने । हुन पनि समाजिक सञ्जालका नकारात्मक असरबारे चिन्ता गर्ने समूहका अधिकांश सदस्य ३० को दशक छन् । सायद घरमा तारको टेलिफोन रहेको सम्झना हुने यो अन्तिम पुस्ता होला ।
यो युवा पुस्ता आफूले निर्माण गरेको सामग्रीबाट आफै टाढिनु अर्थपूर्ण रहेको छ । यिनीहरू आफ्ना बच्चाहरू सिलिकन भ्यालीका ती स्कुलमा पठाउँछन् जहाँ आइफोन, आई–प्याड र ल्यापटपहरू समेत प्रतिबन्धित गरिएका छन् ।
सन् २०१७ मा आएको एडम अल्टरको पुस्तक ‘इरेस्टिबल’मा स्टिब जब्सको घरमा समेत यस्तै बन्देज रहेको उल्लेख छ । स्टिभ जब्सको आधिकारिक आत्मकथा लेख्ने क्रममा उनको घरमा कैयौँ पटक आउजाउ गरेका वाल्टर आइज्याकसनले जब्सको घरको वातावरणबारे अल्टरसँग अनुभव बाढेका छन् । “उनका बच्चा कोहीसँग पनि आइफोन वा आइप्याड थिएन । कसैमा पनि मोबाइल नहँुदाको छटपटी दैखिँदैन थियो ।” यो कुरा स्टिभ जब्स आफैले सन् २०१० मा न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तवार्तामा भनेका थिए । उनले सो पत्रिकाका निक बिल्टनलाई आफ्ना बच्चाहरूले कहिले पनि आइप्याड नचलाएको बताएका थिए । यस्तै नियमन अरू प्रविधिका कार्यकारीले पनि आफ्नो घरमा लागू गरेको विल्टनको थप खोजले देखाएको थियो । सायद यो ड्रग व्यापारमा भनिने भनाइसँग मिल्छ ः आफ्नो उत्पादनको लती आफै नहुनु ।
Previous जापानको सहयोगमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक अब आठ लेन बन्ने
Next How To register In Hamro Nepali bazar . Com
Join 22,132 other subscribers
लगानी सम्मेलन : घाँडो बन्यो विप्लव समूह !
काठमाण्डौंमै भेटिए अनौठो “कुकर कफी” बनाउने ठाँऊ, ग्राहकहरुको लाग्यो लर्को | Cooker Coffee
Copyright © 2018. All rights reserved. | Blog by Hamronepalibazar.com.